Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Hafanàm-po nomerika tamin’ny Jona 2013
Hafanàm-po nomerika · Jona, 2013
Tantara mikasika ny Hafanàm-po nomerika tamin'ny Jona, 2013
Benin24 Jona 2013
Mampatanjaka Ny Aterineto Ho Sehatra Fanetseham-Bahoaka Ny Tati-Baovao-Pihetsiketsehana
Amerika Latina24 Jona 2013
Tra-pahasahiranana tokoa ny politisiana mahazatra amin'ny fahazoana ny fomba fampiasan'ireo hetsika ny fitaovana tahaka ny Twitter sy ny Facebook. Mihevitra ry zareo fa ireo fitaovana ireo dia sehatra hanaovana doka ny tena na, raha mety indrindra, fomba hamoahana vaovao ho an'ny mpifidy.
Afrika Mainty18 Jona 2013
Mbola mitohy manerana izao tontolo izao ny fotoam-pahatsiarovana ofisialin'ny lasibatry ny fandrimpaham-bahoaka tao Rwanda tamin'ny 1994. Saingy ankavitsiana ny mbola mahatadidy ny Kapiteny Mbaye Diagne. Nefa dia nampiseho herimpo tokoa io tanora manamboninahitry ny tafika senegaley io nandritra ny fotoana be fieboeboana fotsiny ny ambiny manerana izao tontolo izao. Efa...
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana18 Jona 2013
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana17 Jona 2013
Monina any Casablanca i Fedoua Miski ary namoaka gazety-boky an-tserasera vaovao ho an'ny vehivavy, Maraokana na tsia, antsoina hoe Qandisha, herintaona sy tapany lasa izay. Ity ny tafatafa nifanaovana tamin'ny mpanorina ity "Magzwine" feminista ao Maraoka ity.
Azia Atsimo14 Jona 2013
Nahazo tsikera betsaka avy tamin'ireo mahery fo any an-toerana ny fanapahankevitry ny Filan-kevitry ny Ideolojia Silamo (CII) izay nandà ny ADN ho porofo voalohany amin'ny tranga fanolanana. Manana ny mpanohana azy anefa io fanapahan-kevitra io, ny sasany faly fa misy fikambanana goavana ara-dalàna mandinika ireo olana ara-pivavahana any Pakistà.
Hatezerana Noho Ny Herisetra Tamin'ny Fisamborana Ireo Mpaka Sary Mpanao Gazety Espaniola Roa
Eoropa Andrefana14 Jona 2013
Nozaraina be tao amin'ny Twitter amin'ny tenifototra hoe #RaúlLibertad ireo vaovao momba ny fisamborana ilay mpaka sary mpanao gazety Raúl Capín, tany Madrid. Voasambotra ihany koa i Adolfo Luján, mpaka sary mpanao gazety. Hafatra maro maneho fahatezerana sy manohitra ny famoretana ny mpanao gazety izay mitatitra ny fikomiana ara-tsosialy no...
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana12 Jona 2013
Navoakan'ny Global Voices ny ampahany amin'ny bilaogin'i Sabline Blanc sy Ophélia Noor : “Les hackers dans la cité arabe” noho ny fahitàna ny ataon'ireo mpanao aterineto any Afovoany Atsinanana sy any Afrika Avaratra. Ankehitriny hitany ny tontolon'ny aterineto any Alzeria niaraka tamin'ny tanora geek roa avy ao amin'ny Fianarana ambony...
Azia Atsimo12 Jona 2013